देश – कालीगण्डकी पोष्ट
काठमाडौं । नेपालको सरकारी समाचार एजेन्सी राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)को अध्यक्षमा धमेन्द्र झा नियुक्त भएका छन् । उनलाई सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।...
काठमाडौं : गृह मन्त्रालयले परीक्षणको रुपमा रहेको सप्ताहिक दुई दिने विदा खरेज भएको जनाएको छ। सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै जेठ १ गतेदेखि लागू भएको हप्तामा दुई दिन विदा निदे निर्णय...
जेठ - २७ पाल्पामा जबरजस्ती करणीको आरोपमा प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा तानसेन नगरपालिका वडा नम्बर १२ का २६ वर्षीय राजु विक रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यलय पाल्पाका प्रहरी...
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको १४४ मेगावाट जडित क्षमताको कालीगण्डकी ए विद्युत्गृहबाट उत्पादित विद्युत् भारत निर्यात सुरु भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कालीगण्डकी विद्युत्गृहबाट उत्पादित विद्युत् शनिबार...
दीर्घ बहादुर चन्द धापासी, काठमाडौँ हुकुम् सदर हुन्न कदर गरिद्यौ मेरो मत बदर पांच पाँच अक्षरको दुई पंक्तिमा लेखिने जम्मा दश अक्षरको लघुत्तम कविता विधा “आगो“ हो र त्यसैलाई मुक्तक...
अब चार पालिकाको मात्रै अन्तिम नतिजा आउन बाँकी
काठमाडौं,१२ जेठ ७५३ स्थानीय तहमध्ये अहिलेसम्म ७ सय ४९ वटा पालिकाको मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ । अब ४ वटा पालिकाको मात्रै अन्तिम नतिजा सार्वजनिक हुन बाँकी छ । जसअन्तर्गत...
काठमाडौँ महानगरको प्रमुखमा वालेन कसरी सफल भए ?
दीर्घ बहादुर चन्द काठमाडौं,१२ जेठ काठमाडौं महानगरको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अव केही संख्यामा मात्र गणना गर्न बाँकी छ । स्वतन्त्र उम्मेदवार वालेन शाहको जित सुनिस्चित भएको छ...
गाउँ फर्कनेको लर्को, एकैदिन यति धेरैले छोडे काठमाण्डौ !
काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी हुनका लागि काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिने यात्रुको संख्या बढेको छ । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक कार्यालयको रेकर्ड अनुसार बुधबार साँझ ७ बजेसम्म ६७ हजारले उपत्यका छोडेका...
काठमाडौं, बैशाख २८ । ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मंगलबार राति १२ बजेबाट मौन अवधि सुरु भएको छ । निर्वाचन आयोगले जारी मौन अवधिको पालनामा ध्यान दिन सबै...